Madaxweyne Farmaajo oo ka baaqday Safar uu ku tagi lahaa dalka Qadar. – Marqaanmedia24.com
Maxamed Cabdullahi Farmaajo Madaxweynaha dowladda Fedraalka Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safar maanta ay ku tagi lahaayeen dalka Qatar ka baaqday kadib markii Madaxweynaha laga dalbaday in uu xaliyo khilaafka soo kala dhexgalay Gudoomiyaha Golaha shacabka ee Baarlamaanka Maxamed Shiikh Cusmaan Jawaari iyo Ra`iisul Wasaaraha Xukumada Fedraalka Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay sidii xal uga gaari lahaa khilafkaas dartiis uga baaqday safarka oo maanta ku tagi lahaa dalka Qatar kaasi oo dhawaanahaanba lasugayay.
Khilaafkaan ayaa lagu tilmaamay in uu curyaamiyay howlaha dowladda kadib markii lagu mashquulay Mooshinkaasi.
Wararka qaar waxa ay sheegayaan inta uu ka xalinayo khilaafkaan iminka taagan uusan Madaxweyne Farmaajo safar dalka dibaiisa ah uusan ubi doonin maadaama Golayaasha qaar ee dowladda Soomaaliya uu soo kala dhex galay khilaaf xoogan.
Safarka uu ka baaqsaday Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa la sheegay in mashaariicyo hormarineed ee wax badan loogu qaban lahaa dalkeena Soomaaliya lasoo saxiixan lahaa Madaxda dalka Qatar.
Sidoo kalane baaqashada Madaxweynaha ayaa noqaneysa safarkiisii labbaad ee ku tago dalka Qatar kadib markii safarkiisii hore uu tagay dalkaasi bartmaha sandkii 2017.
1.Waan ku raacsanahay in uu madaxweyne Ina farmaajo ka baaqday safarkii uu ku aadi lahaa dalka Qadar.Waayo hadda xamar waxaa ka jira qalalaaso siyaasadeed oo u dhaxeeye RW Ina Khayre iyo Jawaari.Maadaama uu jiro muran siyaasadeed haddii uu Ina farmajo wadanka ka baxo waxaa madaxweyne matalaya (Acting) Jawaari.Jawaarina laga yaabee in uu is yiraahdo aarso intuu maqan yahay Ina farmaajo oo gudaha dhig Ina khayre murankuba ha dhammaadee.
2.Soomaaliyeey ma isweydiiseen kuway yahiin kuwa diidan in ay soomaaliya yeelato dawlad wax ku ool ah?Ayana ma isweydiiseen sababta ay kuwaasu u diidan yahiin madax banaanida soomaaliaya iyo soomaaliba?Cismaan cawad iyo Axmad-Waqooyi soo booda.